Bose AR, ihe gbakwunyere n'eziokwu nke ikpo okwu | Akụkọ akụrụngwa
Bose AR, ụlọ ọrụ na-eme ka ụlọ ọrụ ọdịyo kwalitekwuo
Eziokwu gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ eziokwu dị adị taa dị na akara ngosi ahụ nke ga-aka akara ọdịnihu nke teknụzụ ndị a, ndị nrụpụta niile na-akụ nzọ ma na-enyocha ọtụtụ nhọrọ ha kwere ugbu a na ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọbụlagodi ngwaahịa ọdịyo dị na Massachusetts, Bose, gwaa ọkwa nke gị nke ọma: Bose AR.
Nke a mara ọkwa na-ewepụta na tebụl a ọhụrụ obibia nke ike na-etinye aka na mebere ọdịyo na augmented eziokwu iko ngwa na kwa a ama. N'echiche a, nkwupụta ahụ ụlọ ọrụ ahụ nyere na-egosi usoro ikpo okwu zuru oke yana o doro anya na ọ nwere SDK dị mkpa iji mepụta ngwa na ngwaahịa ndị ọzọ n'ime usoro nke ya.
Ihe kachasị mma banyere ya bụ na ha nwere ihe omuma nke iko ndi ozo, ọ bụ ezie na ekwesịrị ịsị na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya dọrọ aka ná ntị na ndị a bụ naanị nke ahụ, ihe ngosi na na ha agaghị erute n'aka ndị na-azụ ahịa. N'ikpeazụ ihe dị mkpa ebe a bụ nnukwu nzọ nke ụlọ ọrụ dị ka Bose na eziokwu gbara ume (AR).
Ugbu a ọrụ ahụ bụ ịchọta ezigbo mmalite nke m ga-amalite ịrụ ọrụ na oru ahụ na karịa ihe niile iji bulie ohere nke teknụzụ nke m nwere ike ikwu nwere ọdịnihu. Eziokwu gbara ọkpụrụkpụ na eziokwu mebere kụrụ ezigbo afọ abụọ gara aga na Mobile World Congress, nke ụdị niile ahụ yiri ka ọ na-agbanye aka na ya ma ugbu a naanị ndị kachasị mkpa ka na-arụ ọrụ ya nke ọma, mana ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ebe ahụ nwere ọtụtụ ọnụ ụzọ mepere emepe na ụwa a ga-erigbu na ụdị dị ka Bose, ndị chọrọ ịkụ nzọ na ya. Anyị ga-ahụ ka akụkọ si na-aga n’ihu mana o doro anya na ọ bụ nkwupụta dị mkpa maka ngalaba eziokwu adịwanye elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Bose AR, ụlọ ọrụ na-eme ka ụlọ ọrụ ọdịyo kwalitekwuo
EBay Superweekend dị ebe a, jiri ohere ndị a dị egwu
A na-agbanye data na arụmọrụ nke ọhụụ AMD Ryzen nke abụọ